Iminqwazi engama-30 yebucket efanelekileyo kuzo zonke iindlela, amaxesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali kwi2021
Impilo yabaseTyhini inokufumana iikhomishini ngokuqhagamshela kweli phepha, kodwa sibonisa kuphela iimveliso esikholelwa kuzo. Kutheni usithemba? Xa kuziwa kwimikhwa yefashoni, iminqwazi yamabhakethi iza kwaye ihamba njengomoya. Ukusuka kumnqwazi webhakethi wodumo weBritney Spears kwii-90s ukuya ngakumbi ezifanelekileyo njengesipho esihlekisayo ...
Ukunxiba umnqwazi sisimo sengqondo
Ukunxiba umnqwazi sisimo esikuMargaret Howell Spring / ngeHlobo leenqwelo-moya le-2020, sabona ibhulukhwe emhlophe emhlophe, ihempe ezigqithileyo zelamula kunye neeturquoise, iipaki ezilula, kunye nesuti ye-boxy. Mhlawumbi yayiyimood, kodwa iikawusi ngaphezulu kweebhulukhwe azange zibonakale zibi, nokuba uninzi lwazo ...
Khetha umnqwazi webhakethi yomlobi ngokwemilo yobuso bakho
Khetha umnqwazi webhakethi yomlobi ngokwemilo yobuso bakho iiHats ziyinxalenye ebalulekileyo yendlela ekhangeleka ngayo, ngaphandle kwexesha. Xa kufikwa ekukhetheni umnqwazi wexesha, andicingi ukuba akukho nto ilunge ngakumbi kunomnqwazi wabalobi? Ayikwazi ukwenza umthunzi kuphela, kodwa nayo ...
Isikhokelo seGalofu 2021 yasentwasahlobo / yehlobo lasehlobo: iminqwazi efanelekileyo, umdlalo welanga visors
ngomphathi ku 21-05-24
Kutshanje sikhuphe i "Ntwasahlobo / ihlobo 2021 Isikhokelo seSimbo", esihlela ezona zibalaseleyo kwisitayile segalufa ngasinye (ezemidlalo, ulonwabo, amalungiselelo, njl.). Kule veki, sithetha ngeminqwazi kunye neemaski zobuso. Sibonelela ngayo yonke into ukusuka kwiminqwazi katata, iminqwazi yebhakethi, iminqwazi yokuhamba, iminqwazi yentambo, njl.
masithethe ngeSigqoko seLanga
ngomphathi ku 21-05-19
Umnqwazi welanga ogqwesileyo kukutya okungafunekiyo okuyimfihlo, kwaye isiphumo saso singaphezulu kakhulu kwembonakalo oyithandayo. Banikezela ngokhuselo lwelanga olongezelelekileyo kwaye bathintela imitha eyingozi ye-UV kulusu, amehlo kunye neenwele. Elona candelo lililo kukuba iintlobo ngeentlobo zezinto ezinikiweyo, ngenxa yoko akufuneki ungene ...
Abayili beminqwazi kaLady Gaga kunye noBrad Pitt bavula ivenkile eOxford
Ezi ntengiso zenza ukuba amashishini endawo avele phakathi kwabantu ekujoliswe kubo (abahlali bendawo). Kubalulekile ukuba siqhubeke nokukhuthaza ezi ntengiso, kuba amashishini ethu endawo afuna inkxaso eninzi kangangoko ngeli xesha linzima. Ikhonkco le-HAT elenze i-headwear ye-Lady Gaga ...
ngomphathi ku 21-05-05
Ukudityaniswa komnqwazi Ukudityaniswa kweminqwazi kufuneka kuthathele ingqalelo umbala wethu wolusu Umbala womnqwazi kufuneka uhambelane nombala wolusu, umzekelo, abantu abanolusu olukhanyayo abafanelekanga ukukhetha umnqwazi omhle wombala, kwaye ukukhetha ucoceko olusezantsi lomnqwazi wombala ophakathi ...
Esi sigqubuthelo samanzi singangeni manzi sikhusela isikhumba sangaphandle entloko
Umnqwazi we-Melin's Hydro awusindi kwaye uliqabane elifanelekileyo kuyo yonke imisebenzi yangaphandle. Xa uphumle echibini okanye elunxwemeni, khusela isikhumba sakho entlokweni kubushushu. Kwaye ungakhathazeki ukuba izokuwa emva kwexesha, kuba zonke izinto zikumgangatho ophezulu kwaye zomelele! Iti yethu ...
Enye yezi hats zemifuno ezinesitayile zinokukwenza ubonakale ngakumbi ugqibelele
Nokuba usuku lwakho luneenwele ezimbi, ukukhuselwa lilanga, okanye iindlebe ezibandayo, umnqwazi unokuba mhle kwaye ubonakale. Kodwa inkohlakalo ayikho into enhle. Ngethamsanqa, kukho umnqwazi wevegan kuwo onke amatyeli-sikunike isikhokelo kuzo zonke ezi zinto. Ngokwenyani, ngaba kukho umnqwazi obonisa ngakumbi kunebaseball ...
Nguwuphi umbala ngowona mnqwazi ungcono wokuwunxiba ehlotyeni?
Nguwuphi umbala ngowona mnqwazi ungcono wokuwunxiba ehlotyeni? Ehlotyeni abantu abaninzi bayathanda ukuphuma bayokunxiba umnqwazi, kuba ayinakuphucula kuphela isalathiso semfashini, kwaye inokuzisa neziphumo zabo zokuzikhusela elangeni. Iziphumo ezilungileyo? Bomvu ...
UTimothée Chalamet uqinisekisile nje ukuba umnqwazi webhakethi ulapha
Nabani na oneenwele ezimdaka njengomdlali weqonga oneminyaka engama-24 ubudala uTimothée Chalamet (UTimothée Chalamet) uyazi ukuba ngamanye amaxesha ezo curls zendalo zinokuphuma kulawulo, zisenza kube nzima ukuphatha ibhodi eyintloko. I-Chalamet ihlala ixhomekeke kwi-headgear ukufihla amaqhuma ayo angalawulekiyo: wayenxibe u-Elara Pictu ...
Inkqubo yoqeqesho lwe-Smart ERP
(1) Ukubonelela ngenkqubo yolwazi edibeneyo yokuqonda idatha yeshishini kunye nokwabelana ngolwazi. (2) Ukulungelelanisa kunye nokumisela iinkqubo zeshishini ngendlela efanayo, ukuphelisa umsebenzi ophindiweyo ekusetyenzisweni kweshishini, ukufezekisa ukubekwa emgangathweni kunye nokubekwa emgangathweni kokuqhutywa kweshishini, ukubonelela ngokudityaniswa kwedatha, kunye nearb ...